Nagu saabsan | Amso Solar Technology Co., Ltd.
9BB Qeybaha Kala-jaridda Qalabka Kala-baxa ah
9BB nus unug dhamaan madow monow 450w
9BB nus unug unug 350w-375w
9BB nus unug mono 370w
9BB nus unug mono 430w
9BB nus unug mono 420w-445w
5BB Guddiyada Unugga Kala-jarista
5BB 120 unugyo mono 310w-335w
5BB 120 unug poly poly 270w-290w
5BB 144 unugyo mono 380w-400w
5BB 144 unug poly polyw 320w-350w
baalayaasha cadceedda caadiga ah
36 unug mono monolar qoraxda 165w175w190w
36 unug unugyo badan oo qorraxda ku shaqeeya 150w160w170w
48 unug mono monolarka qoraxda 230w240w250w260w
48 unug unugyada qoraxda badan 200w210w220w230w
60 unug mono monolarka qoraxda 290w310w320w
60 unug oo ah baalayaasha qoraxda ee 260w270w280w290w
72 unug oo ah unugyada qoraxda ku shaqeeya oo ah 350w360w380w390w
72 unug unugyo qoraxda ku shaqeeya oo ah 310w330w340w350w
96 unug mono monolar qoraxda 460w470w480w490w500w
96 unug oo poly polyslar ah 420w430w440w450w460w
Cabirka Yar ee Gudiyada Qoraxda
cabbirka yar yar ee looxyada qorraxda leh 20w
cabirka yar yar ee baararka qoraxda 50w
cabirka yar yar ee unugyada qoraxda 45w60w75w90w
baalayaasha yar yar ee poly-yada ku shaqeeya 40w50w65w80w
cabirka yar yar ee unugyada qoraxda leh 105w120w130w150w
baalayaasha cadceedda yar yar ee polyw 110w120w130w
Amso Solar Technology Co., Ltd.waa soo saaraha baalayaasha cadceedda ku shaqeeya oo la soo saaray 12 sano ka badan. Waxaan leenahay khibrado buuxa oo ku saabsan labada adeeg ee OEM iyo ODM. Sanadihii la soo dhaafay, Waxaan dhisnay shirkado ciriiri ah oo leh noocyo badan iyo soo-saareyaasha tier one. Waxaan si rasmi ah loo aasaasey 2017 si aan u keenno sumadeena: Amso Solar. Warshaddeenu waxay kudhowdahay harada quruxda badan ee HongZe, taas oo ku taal Huaian, JiangSu, Shiinaha.
Amso Solar wuxuu ku takhasusay soo saarida unugyada cadceeda iyo baalayaasha cadceeda oo ay damaanad qaaday 25 sano oo dammaanad ah. Khadadka wax soo saarka qoraaladayada waxay daboolayaan taxanaha 5BB iyo 9BB, kala duwanaanta awooda oo aad u balaaran 5w ilaa 600w, waxayna soo gabagabeynayaan baalayaasha qoraxda ee loo habeeyay, waxay jaangooyaan qoraalada cadceedda iyo kala bar unugyada qoraxda Aragtida cabirka unugyada, waxaan ku dabaqnaa seddex unug oo muhiim ah qoraxda wax soo saarka qoraxda: M2 156.75mm, G1 158.75mm, iyo M6 166mm.
Si loo qanciyo macaamiisha waayo-aragnimadooda wax-iibsiga, waxaan horumarinay ganacsi dheeri ah si aan u siino qaybaha nidaamka qorraxda, sida PWM iyo xakamaynta MPPT, Lead-acid, gel iyo lithium batteriga, shabakadda ka baxsan iyo qalabka wax lagu beddelo. Dhanka kale, waxaan sidoo kale bixinnaa naqshad xirfadeed oo dhan oo aan u qaybineynaa adeegga tamarta qorraxda ee shabakadda ku xiran iyo ka baxsan shabakadda.
Si loo sahamiyo suuqa adduunka, waxaan helnay shahaadooyin cayiman si aan ula kulano shuruudaha u qalmitaanka kala duwan sida CE, TUV, CQC, SGS, CNAS. Waxaan haynaa qiimeyn heer sare ah xulashada qalabka, waxaan soo bandhignay qalab casri ah oo caalami ah, waxaanna si adag u fulineynaa nidaamka xakamaynta tayada si loo hubiyo in badeecad kasta oo ka socota Amso Solar ay u qalanto. Awooddeena cutubyada sanadlaha ah waxay gaaraysaa 1 0 0 megawatt. Suuqyadeenna waaweyn waxay ka kooban yihiin gudaha, Koonfur-bari Aasiya, Yurub iyo Bariga Dhexe.
Aragtidayadu waa in la faafiyo ku-shaqaynta tamarta qorraxda iyo in la suurtogeliyo isticmaalka kheyraadkan la cusboonaysiin karo. Waan rumaysanahay taasi iskaashiga ganacsigu waa inuu keenaa waxtar labada dhinacba ah waana inuu raadsadaa iskaashi muddada-dheer ah. Amso Solar si daacad ah u raadso su'aalahaaga oo diyaar u ah inay bixiso xalka farsamada tamarta qorraxda.
Cinwaanka: Rm 1603, 99 Zhongshan Rd, Nanjing, Shiinaha
Telefoonka gacanta: 0086-13814007208
Menu ugu weyn
Naga tag e-maylkaaga addressto subscribe